एमालेकै कारण राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनावी तालमेल भङ्ग
निशान न्युज जेष्ठ १५, 2074
काठमाडौं । एमालेकै कारण संयुक्त रुपमा चुनावमा जाने वातावरण बिग्रिएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल भङ्ग भएको घोषणा गरेको छ । एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच जेठ ८ गते आसन्न दोस्रो चरणको चुनावका क्रममा प्यूठानमा तालमेल गर्ने सहमति भएको थियो । दुई दलबीच भएको सहमति लागू गर्न र पार्टीमा देख...
उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन बन्द
जेष्ठ १२, 2074 काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले दोस्रो चरणको निर्वाचन भाड्न बन्दको घोषणा गरेको छ । उम्मेदवारी दर्तालाई असफल बनाउन दुई दिन बन्दको घोषणा गरेको छ । राजपाले उम्मेदवारी दर्ता असफल बनाउन १८ र १९ गते मधेस, थरुहट र लिम्ब...
माओवादी केन्द्रको नैतिक जित : भुषाल
जेष्ठ १२, 2074 भक्तपुर । पहिलो तहको निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सक्नुलाई नै जित मानेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुषालले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर...
सहमतीय सरकार गठनको प्रयासमा दलहरु
जेष्ठ १२, 2074 काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विहीबार दलहरुलाई सहमतीय सरकार गठन गर्न ७ दिनको समय दिएलगत्तै दलहरु आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले दलहरुलाई...
पोखरा लेखनाथमा एमालेका जिसीले मारे बाजी
जेष्ठ १२, 2074 पोखरा । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका मानबहादुर जिसी भारी मतअन्तरले विजयी भएका छन् । जिसीले कांग्रेसका उम्मेदवार रामजी कुँवरलाई १४ हजार मतान्तरले पराजित गर्दै जिसी मेयरमा विजयी भएका हुन् । जिसीले ६० हजा...
२२ स्थानमा कहिले होला निर्वाचन ?
जेष्ठ ११, 2074 काठमाडौं । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि दोस्रो तहको निर्वाचन अन्योलमा परेको छ । खासगरी सरकारले पछिल्लो समयमा तराईमा २२ स्थानीय तहको संख्या थपेपछि दोस्रो तहको निर्वाचन हुदँैन कि भन्ने आशंका पैदा गरेक...
पत्रकार र शिक्षक उम्मेदवार
जेष्ठ ११, 2074 इलाम, । स्थानिय निकायको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पत्रकार महासघइलाममा दुई पत्रकारले राजिनामा दिएकका छन् शाखाको कोषाध्यक्ष जय राई र कार्यसमिति सदस्य ठाकुर श्रेष्ठले आ–आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर नेकपा एमाले बाट उम्मेदवार बनेका हुन् । राई सूर्योद...
जेष्ठ ११, 2074 दाङ, आगामी जेठ ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको चुनावका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र दाङले जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहका उम्मेदवार टुङ्गो लगाएको छ । दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सातवटै गाउँपालिकामा उम्मेदवार टुङ्गो लगाएक...
जित र हारका कारण खोज्दै
जेष्ठ ११, 2074 काठमाडौँ, । नेकपा एमाले ले स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारले जित्नु र हार्नुका पाँच पाँच कारणसहित मातहतका कमिटीसँग विवरण माग गरेको छ । महासचिव ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पहिलो चर...
सहज होला त देउवाको बाटो ?
जेष्ठ ११, 2074 काठमाडौं । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुलेको छ। तथापि अहिले नै देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन् कि बन्दैनन् भन्ने शंका उब्जिएको छ । पूर्ववत सह...
← अघिल्लो 12… 232 233 234 235 236 237 238 239 240 पछिल्लो →
पूर्व मसालका ६ जनाले गरे माओवादी केन्द्रमा इन्ट्री
काठमाडौं । पुस १० गते मात्रै नेकपा मसाल केन्द्रिय सम्पर्क केन्द्रबाट एकता गरेर आएका ६ जनाले नेकपा...
माओवादीको महाधिवेसन : दलित प्रतिनिधिले जनाए आपत्ति, महाधिवेसन बहिष्कार गर्ने चेतावनी
खुल्यो निमावि तहमा २५९८ शिक्षकको विज्ञापन
स्टेजमै कुटिए चर्चित गायक राजेश पायल राई
मनोज रामले पाए भीम-माया स्मृति पुरस्कार
१४ दिनमा सकियो नेपाली कांग्रेसको महाधिवेसन : यस्तो बन्यो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको टिम (सुचीसहित)
दलित संघको जिम्मेवारी हेरफेर : सोनी बने महासचिव, दमाई सचिव
कडा एक्सनमा उत्रिए मन्त्री आले : पशुपति धर्मशालाको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन